Taabit cabdi oo si kulul uga hadlay Natiijadii imtixaanka dowladda.
Guddoomiyihii Gobolka Banaadir ahan Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay Natiijadii imtixaanka Dugsiyada Sare ee dalka ee shalay shaacisay Wasaaradda Waxbarashada hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Soomaaliya.
Qoraal uu soo saaray Taabid Cabdi ayaa waxaa uu sheegay in Natiijada Imtixaanka uu ku jiray humaag badan iyo waxyaabo is diidan, isla markaana waxaa uu sheegay in muhiim ay tahay in la turxaanbixiyo Natiijada lasoo saaray.
Sidoo kale Taabid Cabdi ayaa Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta Sare ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan bulshada ugu soo bandhigto caddeymo iyo tafaasiil si dhab ah loogu kuur galay (empirical evidence) oo bulshadu lagu qancin karo.
Hoos ka Akhriso Qoraalka Taabid Cabdi uu soo saaray.
« Akhriso 10-ka arday ee galay Kaalmaha Koowaad imtixaanka Dowladda Soomaaliya.
Beelweynta Mudulood oo Muqdisho ku soo dhaweeyay Axmed madoobe iyo dani (SAWIRO) »